Talk ကိုလွှဲပြောင်း: ဘက်ခမ်းမိုင်ယာမီမှ Lionel Messi ကိုရောက်စေဖို့လိုလား - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ »လွှဲပြောင်း Talk ကို: ဘက်ခမ်းမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ Lionel Messi ကိုရောက်စေဖို့လိုလား
Talk ကိုလွှဲပြောင်း: ဘက်ခမ်းမိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ Lionel Messi ကိုရောက်စေဖို့လိုလား
လွှဲပြောင်းဝင်းဒိုးကိုဥရောပတိုက်တွင်ပိတ်ထားပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာကဇန်နဝါရီလစောင့်သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှပဲ! ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာနောက်ဆုံးပေါ်လွှဲပြောင်းကြည့်ရှုရန် အောက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်အတင်းအဖျင်းများရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်
အားလုံးအဓိကပြီးစီးခဲ့လွှဲပြောင်း | ဥရောပလွှဲပြောင်း၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းချဉ်းကပ် Lionel Messi အင်တာမီလန်မိုင်ယာမီဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့မေဂျာလိဂ်အသင်းတစ်သင်းအတွက်အခါတိုးချဲ့ကလပ်ပွဲဦးထွက်လာမယ့်ရာသီနှင့် ပတ်သက်. the Sun ရေဒီယိုဘာစီလိုနာ၏အစီရင်ခံစာများဖော်ပြထားတယ်။
ဘက်ခမ်း၏အသစ်ကလပ်မတ်လ 2020 အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ မက်ဆီ, သူ့ကိုကလပ် join ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်စာချုပ်ကျေးဇူးတင်ယခုနှစ်နွေရာသီအချည်းနှီးအစပိန်ချန်ပီယံစွန့်ခွာရန်ပုံရရှိနိုင်ပါသည်။ အသီးအသီးရာသီအဆုံးမှာဥရောပကလပ်အခမဲ့ပြင်ပတွင်။
ဘက်ခမ်းအင်တာမီလန်မိုင်ယာမီ၏ပိုင်ရှင်အဆင့်ဆင့်ရဲ့ထိပ်မှာစတင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောသူသည်အဆင့်မြင့်ကစားသမားကမ္ဘာပေါ်မှာရှာဖွေနေခဲ့သည်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူလည်း ardently ချဉ်းကပ်ချင်မှဝန်ခံ စီရော်နယ်ဒို et ဆွာရက်ဇ် et Edinson ကာဗာနီ နှစ်ဦးစလုံးတောင်ပိုင်းသဲသောင်ပြင်မှရွေ့လျားနဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။
ဘာစီလိုနာ Xavi Campos ရေဒီယိုရွှေဘောလုံး၏ဆုရှင်ငါးကြိမ်မှသဘောတူညီချက်အလားအလာ "ကြီးမားသော" စိတ်ဝင်စားကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။ သို့သော် Josep မာရီယာ Bartomeu သည်ဘာစီလိုနာမန်နေဂျာကလပ်သူမ၏ယောက်ျားသည် 2022 နိမ့်ဆုံးသည်အထိ featured စောင့်ရှောက်ရန်လိုကြောင်းပြောသည်။ ရောင်းချကာတာလ၏ point Mundo ပို့ မကြာသေးမီကဘာစီလိုနာမက်ဆီသည်သူ၏ကစားသမားဘ၏အဆုံးသည်အထိစခန်း Nou မှာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့တစ်သက်တာစာချုပ်ကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ကြောင်းကိုအကြံပြုသည်။
21.52 TSB: ကျနော်တို့စပိန်ကနေမျက်ခုံးကြီးပြင်းအများအပြားအစီရင်ခံစာများနှင့်အတူဗုဒ္ဓဟူးနေ့လွှဲပြောင်း Talk ကို၏တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဗလင်စီယာချန်ပီယံလိဂ်နှစ်ခုဆက်တိုက်အဝင်ရိုက်ချက်များဖို့ကလပ်ဦးဆောင်နေစဉ်အတွင်း, ဒီနံနက်နည်းပြမာစီလီနိုထုတ်ပယ်နှင့်နောက်ဆုံးနွေဦးဟာ Copa del Rey အနိုင်ရနှင့် ရည်မှန်းချက် ယခုမာစီလီနို၏ထုတ်ပယ်အာဏာလပေါင်းများစွာနောက်ကြွလာသည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ လိုသူပိုင်ရှင်ကပတေရု Lim ကနှင့်သူ၏မန်နေဂျာများနှင့်အားကစားဒါရိုက်တာ Mateu Alemany အကြားရုန်းကန် "ကစားသမားလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အားကစားဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ "
20.35 TSB: ဟိုဆေး Callejon နှင့်အတူနာပိုလီကိစ္စ အဲဒီမှာသာ 12 လစာချုပ်မကုန်မီဖြစ်ကြပြီးကအသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ်အပေါ်ညှိနှိုင်းမှုကောင်းစွာသွားကြသည်ပေါ်လာပါဘူး။
"နာပိုလီတစ်လအတွက်ငါ့ကိုမခေါ်ကြဘူး, ကျနော်တို့အခုအပြောင်းအရွှေ့စာချုပ်ပြီးဆုံးကြောင်းတဖနျကွားပါလိမ့်မယ်မှန်း, "ကကိုးကားထားတဲ့အေးဂျင့် Manuel Garcia က Quilon ကလည်း, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်တာဗျူး CalcioNapoli24.it ကိုးကား။ "အဲဒီမှာပထမဦးဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုခဲ့ပေမယ့်ကစားသမားများ၏အခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခဲ့ပါဘူး။ "
19.18 TSB: အဆိုပါတိုက်ခိုက်သူအလွန်အမင်းအကယ်ဒမီလီဗာပူးလ် rated ရှင်ပေါလု Glatzel ကလပ်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုရေရှည်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 18 နှစ်ပေါင်းလုလင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလီဗာပူးလ်အသင်းနှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး 2018-19 ပြီးနောက်တိုးတက်လာသောအခြေအနေများအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ အပြည့်အဝပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ .
18.01 HNL: တစ်ဦးကတစ်ရက်အကြာတွင်များစွာသောဗြိတိန်မီဒီယာများချယ်လ်ဆီးဗလင်စီယာ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများဖွင့်လှစ်ခဲ့ဖူးကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ ဟိုဆေးလူးဝစ်ဂါယာ Stamford Bridge ကိုတစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ညှိနှိုင်းရန်သည့်အခါလွှဲပြောင်း၏တားမြစ်ချက်, စတိုးဆိုင်ဘောလုံး၏ရုတ်သိမ်း စူပါပြန်ပို့ခံရ အဆိုပါ 24 နှစ်ရှိကစားသမားအနောက်လန်ဒန်ကလပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုမသိကြောင်းအစီရင်ခံစာများ။
16.44 TSB: ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူနွေရာသီ flirtation ပြီးနောက်၎င်း၏စျေးကွက်တန်ဖိုးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းမှာအဟောင်း 20 နှစ်ဂိုးသမားဆုံးရှုံးရှောင်ရှားရန်, အေစီမီလန်နှင့်အတူစာချုပ်ညှိနှိုင်းမှုဖွင့်လှစ် Gianluigi Donnarumma ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Corriere dello Sport အစီရင်ခံအဖြစ်ကိုးကား။ တစ်ခုမှာပြဿနာ: Rossoneri အီတလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ဦးလစာဖြတ်ယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ တနှင့်အတူကံကောင်းပါစေ။
15.27 HST: Real Madrid အသင်းဇန်နဝါရီလအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုပြင်ဆင်နေသည် ရှင်ပေါလု Pogba နှင့်ပေးပို့နိုင် Toni Kroos အခြားဘက်မှာ။ ဒို Inda အလားအလာသဘောတူညီချက်တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်သင်တန်းနည်းပြအယ်လ် Chiringuto,
မိမိအလိုဆန္ဒမှ မန်ယူအသင်းမှထွက်ခွာ သူက "သစ်ကိုစိန်ခေါ်မှု" လိုချင်သညျကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Real Madrid အသင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်သူ၏ compatriot Zinedine ဇီဒန်း, တစ်ဦးသက်တမ်းကြာ Admiral အတူလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရောင်းလိုသောမဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာရီးရဲလ် Pogba သူ၏လိုက်စားအရှုံးမပေးကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအသစ်ကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ကလပ်ကပ္ပတိန်, Sergio Ramos ၏ပစ်လွှတ်မှာတံခါးကို Pogba နေဆဲဘာနေဗျူးသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဟုဆိုသည်။
"ငါသည် Real Madrid အသင်းကအမြဲသူ့ကိုတူသောကောင်းသောကစားသမားအတွက်ဖွင့်တံခါးကိုရှိကြောင်းထင်ပါတယ်" Ramos ကပြောပါတယ် နေ့စဉ် Express ကို။
"ငါ့ကိုအဘို့, Pogba ကြီးစွာသောကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
"ငါကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖို့ဟန်ချက်ဆောင်တတ်၏ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထိုးစစ်ရှိပြီးတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်ရှိပါတယ်။ "
14.42 TSB: Iñaki Williams က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရှေ့မှာအစားထိုးရန်စိတ်ကူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ က ကိုးနှစ်အသစ်တခုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး အားကစားဘေလ်ဘောင်, လာလီဂါနှင့်အတူ
Ole ကို Gunnar Solskjærအင်တာမီလန်မှာဘယ်လဂျီယံ၏လွှဲပြောင်းပြီးနောက်ရိုမီလူလူကာကူများအတွက်အလားအလာအစားထိုးအဖြစ် Williams ကထည့်သွင်းစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအမြဲဝီလျံကသူ့ဇာတိမြို့ရဲ့ကလပ် join ရန်ကင်းကြောင်းပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
"ကျွန်မနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဆက်အသွယ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကသူကိုသင်မပြောနိုင်," ဝီလျံကဆိုသည်။ အယ်လ် Larguero .
"ကျနော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအားကစားကလပ်မှာရှိနေဆဲဒီမှာအနားယူအမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရီးရဲလ် Sociedad join? ငါမသွားပါဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ 100% ။ "
အစဉ်အဆက်ဥရောပတစ်ကစားသမားနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးအရှည်ဆုံးစာချုပ်များ၏တဦးတည်းသောကစားသမားဟောင်း 25 နှစ်ပေါင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးအသစ်စာချုပ်, 125 သန်း၏တစ်ဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပိုဒ်ရှိပါတယ်။
- Krichko: Iñaki Williams ကစပိန်အတွက်သမိုင်းဝင်အားကစားကလပ်အတွက်လမ်းဖွင့်လှစ် "ငါဘစျက်ဖြစ်ခြင်းဘာသွေး"
13.54 TSB: ချိတ်ဆက်ကောလာဟလများ Paulo Dybala အာဂျင်တီးနားပရီးမီးယားလိဂ်၌ကျင်လည်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့အပြီးဂျူဗင်တပ်စ်မှထွက်ခွာရန်ငြင်းဆန် မန်ချက်စတာယူနိက်တက် et တင်ဟမ်ဟော့စပါး ပြီးခဲ့သည့်လက။  19659008] ယခုအီတလီသတင်းစာ Tuttosport ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းဇန်နဝါရီလအတွင်းကနိုင်ငံတကာ 24 သင်တန်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ရန်လိုလားလို့ပြောပါတယ်။
Dybala ရာသီရဲ့ start ကတည်းကယခုရာသီလုပ်ဆောင်ချက်သာ 14 မိနစ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ နှစ်ဦးစလုံးဂျူဗင်တပ်စ်စီးရီးအေအနာဂတ်မှာ Dybala ဖို့ဖြစ်တယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမြှင့် Parma နှင့်နာပိုလီဆန့်ကျင်ကိုက်ညီဖွင့်လှစ်
Tuttosport မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်းမန်ယူအသင်းမှာ Dybala ရောက်စေဖို့အခြားလေလံဖွင့်နိုင်နေချိန်တွင် PSG အသင်း, Dybala ၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားစေဖို့ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောစပါးကနေယှဉ်ပြိုင်မှုရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူကဆက်ပြောသည်။
13.08 CST: ရိုးမား Daniele De Rossi နှင့်ဒဏ္ဍာရီ Francesco Totti Boca Junior ပူးပေါင်းနိုင် - ဒါပေမယ့်သင်ထင်သောအရာကိုမရမယ့်,
"Totti ငါ့ကိုခေါ်တော်မူရိုးမားအဘို့ကစားသူကိုက Nicolas Burdisso, လိုလားပေမယ့်အခုချိန်မှာ Boca ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါသည်, CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
"သို့သော်ကတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ခဲ့: အများအပြား Buenos Aires ရှိဒီကိုလာချင်တယ်။ "
12.18 TSB: မန်ချက်စတာစီးတီးနေဆဲစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မျှော်လင့်ပါတယ် Leroy စိတ်ကောင်းသော ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး, Evening Standard ပြပွဲ
စိတ်ကောင်းသော Philippe Coutinho, အဘွန်ဒစ်လီဂါ၏ချန်ပီယံ, ရာသီများအတွက်ချေးငွေထုတ်ယူသောအရာနောကျမှာအလေးအနက်ဒူးဒဏ်ရာမတိုင်မီနောက်ဆုံးရာသီဘိုင်ယန်များအတွက်ကြီးမားသောပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စီးတီးလွှဲပြောင်း window တွင်ဘိုင်ယန်၏အပြောင်းအရွှေ့ဒီနွေရာသီမှာတားမြစ်နိုင်ရန်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလကြောင့်ဂိမ်းအားမိမိပြန်လာရှေ့တော်၌ထိုဂျာမန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ်လင့်ထားသည်မှမျှော်လင့်ပါသည်။
11h27 TSB: ဘာစီလိုနာအစဉ်အမြဲဆောင်ကြဉ်းရန်၎င်း၏အာဏာကိုအတွက်အရာရာကိုပြုလိမ့်မည် နေမာ ဒါရိုက်တာက Javier Bordas ဘာစီလိုနာသည်နှင့်အညီနွေရာသီ၌သူ၏ပျက်ကွက်ကြိုးပမ်းမှုနေသော်လည်းကလပ်။
နေမာသာနှစ်နှစ်ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းမှာ $ 222 သန်းသူ၏ကမ္ဘာ့စံချိန်လွှဲပြောင်းပြီးနောက်, ကတ်များအပေါ်သလိုပဲ။ အဆိုပါသုံးပါတီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်, သို့သော်သဘောတူညီချက်နောက်ဆုံးတော့တွေ့ရှိခဲ့သည်မခံခဲ့ရပါဘူး။
"ဟုသူကလာလိုပါကကျနော်တို့ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝါအတွက်အရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်" အမှတ် Bordas စပိန် EFE အေဂျင်စီကိုးကား။ "ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်အဘယျအရာခပ်သိမ်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာပြောင်းလဲနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေမာနေမာသည်။
"နေမာ၏အမှုအထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတစ်ခုခြွင်းချက်ကစားသမားဖြစ်ပြီးသူဟာဘာစီလိုနာလာရန်လိုသည်။ ဒါကြောင့်ပဲရစ်သင့်လျော်မျှမက, သူကအဲဒီမှာ go မှားခဲ့, သူသည်ပင်သူကပြောပါတယ်။ "
10.59 TSB: ဒီယေဂိုရှိမောငျအသားအငယ်ဆုံး, Giuliano, အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်၏လူငယ်အကယ်ဒမီ join ဖို့မြျှောလငျ့ထားသညျ, ESPN FC အသင်းမှာသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်။
, Giuliano ဘောလုံးကစားခြင်းနှင့်အက်သလက်တီကို join ဖို့ရှေးခယျြခဲ့ဆက်လက်လိုလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်စပိန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီဒီနွေရာသီလူငယ်အသင်းများကိုမြစ်ပြားများအတွက်ရှိရာမိမိအဘကလပ်ကစားတိုက်စစ်မှူး 17 နှစ်ပေါင်း ဦးခေါင်းနည်းပြ။
စပိန်ကလပ်နီးစပ်သူတစ်ဦးက source ကိုအက်သလက်တီကိုဖီဖာထံမှခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ESPN FC အသင်းကိုပြောသည်။ ကစားသမားမှတ်ပုံတင်ရန်လိုင်စင်ရှိမောင်နှင့်စပ်လျဉ်းသူမျှမလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်လျော်ကြေးရှိလိမ့်မည်သူကဆက်ပြောသည်။ ကပြီးစီးခဲ့လျှင်, Dual နိုင်ငံသားရှိပြီးတစ်ဦးအီးယူနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိထားသူသူကို Giuliano, အက်သလက်တီကိုများအတွက်ကစားရန်ရှိမောင်၏ပထမဦးဆုံးသားဖြစ်လိမ့်မည်။
အစ်ကိုဖြစ်သူ Giovanni, 24 နှစ် jo Cagliari စပိန်ဌာနခွဲ Ibiza ၏စာအုပ်များအပေါ်နေချိန်မှာ Gianluca, 21 နှစ်ပေါင်း, ဤရာသီတစ်လျှောက်လုံးချေးငွေ Fiorentina ခဲ့ကန်ထရိုက်အာဂျင်တီးနားအသင်း Gimnasia y ကအားဖြင့်ထုတ်ချေး Esgrima ။
10.31 TSB [ နာပိုလီ၏ Aurelio De Laurentiis သူအင်တာမီလန်မီလန်နှင့်သိသာထင်ရှားသောလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခကြေးငွေမှာပိုက်ဆံတွေအများကြီးကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းထင်ရှား Mauro Icardi ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးလက်မှတ်ထိုးရန်ကြိုးစား။
Icardi အများပြည်သူရေတံခွန် - အင်တာမီလန်နှင့်အတူထွက်နောက်ဆုံးရာသီတစ်ခုနီးပါးမလွှဲမရှောင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့, သူသည်နောက်ဆုံးတွင်မကြာမီစက်တင်ဘာလ2၏နောက်ဆုံးနေ့မတိုင်မှီပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤနာပိုလီ 26 နှစ်ပေါင်းရန်ကစားသမားအဘို့ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားပြီးမှသာဖြစ်ပါတယ်။
"ငါသည်အင်တာမီလန်မီလန်မှ 60 ယူရိုသန်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဖြစ်ဆုကြေးငွေ Mauro Icardi ကိုဝယ်ခြင်းငှါ," De Laurentiis အားဆို၏ Corriere dello Sport ။ "ငါသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်€ 12 သန်းစုစုပေါင်းစာချုပ် [Icardi ရဲ့ဇနီးနှင့်အေးဂျင့်] Wanda နရာပူဇော်ကြ၏။
"Mauro မိုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သူသည် PSG အသင်းဥရောပအဆင့်ကိုပြန်သွားဖို့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ကြပေမည် - ပိုမိုလွယ်ကူစွာနာပိုလီထက်အဲဒီမှာမီနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမနောင်တ။ Icardi ၏ဆိုက်ရောက်ဖာနန်ဒို Llorente ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတားဆီးခဲ့ကြပေသည်။ "
09h57 TSB: အဆိုပါမန်ယူဂိုးသမား အလက်ဇန်းဒါး Nubel သေးသောကြောင့်, ထိတ်လန့်ဒေါ့မွန်ပြင်းစွာသောအပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှလွှဲပြောင်းသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မထားပါဘူး။
အဆိုပါ 22 နှစ်အရွယ်ကသူ့စာချုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လာမည့်နွေရာသီများအတွက်ဘွန်ဒစ်လီဂါစွန့်ခွာနိုင်ဘူး။
ဒါဟာမန်ယူ Manuel Neuer, တော်ဝင်ချယ်လ်ဆီးအသင်း Nubel ၏ကပ္ပတိန်၏ယခင်ကစားသမားနဲ့တူလှပါတယ်။ မိမိအအေးဂျင့်ဟာပြိုင်ဘက်ကလပ်, ဒေါ့မွန်နှုတ်ပိတ်နိုင်ဘူးစဉ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှပြောင်းရွှေ့ချိတ်ဆက်ထားသည်။
"မသတင်းရှိပါသည်" Nubel သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည် မန်ယူမှာ "ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ "
09h29: HST: လီဗာပူးလ်အသင်းမန်နေဂျာ Jurgen Klopp ပြောသည် Philippe Coutinho သူကဘိုင်ယန်မြူးနစ်, အားကစား Bild မှထုတ်ဖော်ပြသဘရာဇီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားမိမိအပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
Havi ဇန်နဝါရီလ 2018, Coutinho အတွက်ဘာစီလိုနာများအတွက်လီဗာပူးလ်မှထွက်ခွာပြီးနောက် Nou Camp မှာ 18 လအတွင်း disappointing ပြီးနောက်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်စပိန်ချန်ပီယံအားဖြင့်ဈေးကွက်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့ပါသည်နှင့်ဥရောပချန်ပီယံပင်ခေတ္တမျှသည်သူ၏သစ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး related ပါပြီ။ သို့သော်ဘိုင်ယန်အပြီးအပိုင်€ 120 သန်းလာမယ့်နွေရာသီအဘို့အလက်မှတ်ထိုး၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတစ်နှစ်တစ်ချေးငွေတစ်ဦးတည်းနှစ်ချေးငွေရယူများ၏အခွင့်အလမ်းကိုယူ။
"[Klopp] ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောမြားနှငျ့အကြှနျုပျကိုကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆန္ဒကိုစလှေတျတျော," ဂျာမန်ကလပ်ဘာစီလိုနာမှာချေးငွေအပေါ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကပြောသည်။ "သူကဘိုင်ယန်ကိုကြီးစွာသောကလပ်နှင့်ဘွန်ဒစ်လီဂါအကောင်းတစ်ဦးလိဂ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည်ထိုအရပ်၌ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
"ဒါကဒီလိုထူးချွန်နည်းပြ, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်။ ကျွန်မအထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းထံ၌ဤမျှလောက်သင်ယူခဲ့တယ်။ သူကလီဗာပူးလ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါဟာသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဂုဏ်အသရေဖြစ်ခဲ့သည်။ "
08.56 TSB: မန်ချက်စတာစီးတီး၏ကြယ်ပွင့် ကီဗင် De Bruyne ဖြစ်နိုင်ပါသော်လည်း, တနေ့ဟောင်းတဦးအသင်းဖော်ဗင်းဆင့် Kompany Anderlecht အောက်တွင်ကစားရန်မျှော်လင့်နေသည်။
Kompany 11 စီးတီးကလပ်ကပ္ပတိန်အဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ဖလားလေးကြိမ်အနိုင်ရနှစ်ကြာအပြီးသက်သေခံပြန်မန်ချက်စတာအတွက်ယနေ့ညဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကစားသမားသည်ယခုအခါ 33 နှစ်ပေါင်း 12 နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။ သူ၏ဇာတိဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် compatriot De Bruyne အတွက် Anderlecht ကစားသမား-နည်းပြကိုပြောသည် the Sun သူကဘရပ်ဆဲလ်ကလပ်အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
"ငါသည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီးတီးကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုသူကပြောသည်။ "ငါကဒီမှာပြီးအောင်အခါ, တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ခုနစ်ပါးသောအကြှနျုပျအဘို့သူ့အဖွဲ့ထဲမှာနေရာတစ်နေရာစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့ကိုသို့ပြောသည်။
"ဟုသူကငါ့အဘို့ငါပြီးသားအမိန့်၌ငါ့လာမယ့်ဦးတည်ရာရှိမနလြှေငျ, ငါ၏အလာမယ့်အလုပ်။ ငါစီးတီးအတွက်အလွန်တရာသူ့ကိုလက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်။ "
08h34 TSB: လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှုး Sadio လည်ဆံ သူ Anfield မှာဘဝနှင့်အတူ "ကယ့်ကိုပျော်ရွှင်" ဖြစ်ပါတယ်အလေးအနက်ဆိုသည်နှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်အတူပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။
"ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေရန်, ငါဒီမှာမိသားစုကလပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကယ့်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်" ဟုသူကမှပြောပါတယ် ရှုပ်ထွေးသော ယခုအပတ်ထုတ်ဝေအင်တာဗျူးတွင်။ "ကျနော်တို့ကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးပရိသတ်တွေရှိတယ်" ကမ္ဘာ့ဤနေရာတွင်ဖြစ်တယ်, ဒါငါအမြဲတမ်းထောက်ခံမှုများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။
"ဒါကသိပ်အကြှနျုပျအဘို့ကိုသာအကောင်းမဖြစ်, ကကစားရန်အသင်းကိုအပိုဆောင်းလှုံ့ဆျောမှုပေးသည်။ " ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုတိုးတက်လာဖို့ ပို. ပင်အလိုဆန္ဒရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု - ငါမှဖော်ပြကြီးမြတ်အခက်အခဲရှိ ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်ငါကဒီမှာဖြစ်လည်းဖြစ်၏, "
08h00 EST: တစ်ဦးကအစည်းအဝေး၏အလားအလာရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်ဒေါ့မွန်တို့အကြားပြီးခဲ့သည့်ရာသီရာအရပျကိုယူ Jadon Sancho ။ ] ဘွန်ဒစ်လီဂါကလပ်၏အားကစားဒါရိုက်တာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
Sancho ကသူ့ရာသီအများကြီးများအတွက်မန်ယူအသင်းမှပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆက်စပ်ခဲ့, ဂျာမနီအတွက်သူ 13 ဂိုးသွင်းနှင့်အင်္ဂလန်၏အမျိုးသားရေးအသင်း၌သူ၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း
ပြီးခဲ့သည့်စီးရီးဒေါ့မွန်၏နောက်ကွယ်မှဝင်ရသော "အားလုံးဒါမှမဟုတ်ဘယ်အရာကမှ" အမေဇုံချုပ်, တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့မိုက်ကယ် Zorc ယူနိုက်တက်မတ်လအကျိုးစီးပွား Sancho ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြရာမှာအစည်းအဝေးတွင်နှင့်အတူပြောသွား နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ window တွင်ရောင်းချခြင်းမရှိအခွင့်အလမ်းရှိကွောငျးကိုအမျိုးအစားသူ့ကိုသို့ပြောသည်။
"လက်ရှိမှာတစ်ဦးကပူခေါင်းစဉ် Sancho နှင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Zorc လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးမှပြောခဲ့သည်။ အညီအကြီးအကဲများကလပ်ဿိ Sammer, Sebastian Kehl နှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Hans-Joachim Watzke, Daily သတင်းစာကြေးမုံ ။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူကလပ်နှင့်သတ္တုတွင်းနှင့်အတူ "သူ့ဆွေးနွေးမှုများ။
"တစ်ဦးကအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတိုင်ပင်ခံဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံနေပါစေငွေကိုလှူသောကလပ်ကိုပြောသည်သို့သော်လည်းငါသည်ကိုယ်သိသောအရာကိုအညီ, ကြှနျုပျတို့သညျဤနွေရာသီစတင်မကွာစေဘဲမည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်ကစားသမားဒီနွေရာသီမှာဒီခြေလှမ်းကိုယူရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ "
စက္ကူစကား (Nick Judd): ဇန်နဝါရီလအတွင်းစပါး, Dybala များအတွက် PSG အသင်းတိုက်ပွဲတွေလည်း
စပါးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် Paulo Dybala နွေရာသီနှင့် ဘောလုံး Italia Tuttosport Mauricio Pochettino မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားပွနျလညျရှငျနှင့်အာဂျင်တီးနားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာများ၏လက်မှတ်များအတွက်ပြင်သစ်ချန်ပီယံ, ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါအဆင်သင့်သောအီတလီခေါင်းစဉ်ကိုးကား။
Dybala လိုအပ်ချက်များကို Juve မှပိုလျှံခဲ့သည်။ အဆိုပါအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ကလပ် Juve ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဂျူဗင်တပ်စ်၏အားကစားဒါရိုက်တာ, Fabio Paratici, ကလပ်အမြဲကသူ၏ထိုးစစ်ခွက်ဖယ်ရှားပစ်ရစေချင်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
- Marcotti: ဘေးလ်နှင့်နေမာ Dybal အဘယ်ကြောင့်မအကြိုက်
- အော့ဒန်ဝင်း Solskjaer, Pochettino သူသွားကြဖို့လာမယ့်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်း Dyabala တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စပါးအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးအနှုန်းများအပေါ်သဘောတူရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ချယ်လ်ဆီးသည်သူ၏အပြောင်းအရွှေ့ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပင်မှုရုပ်သိမ်းလျှင်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကသူ၏ကာကွယ်ရေးခိုင်မာစေရန်ရှာဖွေနေနှင့် Nice ၏နောက်ခံလူ Youcef Atal အတိုငျး, စာရင်းထဲတွင်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါမေးလ် အမည်မဖော်လိုသည့်အစီရင်ခံစာများကို ကိုးကား. ။
အဆိုပါချယ်လ်ဆီးအသင်းတဦးတည်းဂိမ်းအနိုင်ရပြီ, တဦးတည်းကိုဆုံးရှုံးသူတို့ကို11èmeအဆင့် left ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေးခုဂိမ်းအတွက်နှစ်ကြိမ်ရေးဆွဲ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ဇယား။
သူဌေးကဖရန့်လမ်းပတ်ကာကွယ်ရေးအသင်း၏မခိုင်မြဲပုံအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖွဲ့သူပက်ထရစ်ဗီအဲရာ၏ tutelage အောက်မှာ Atal အတွက်ဆင်းသက်ရန်လိုလားဘာဖြစ်လို့ 360 မိနစ်ကိုးရည်မှန်းချက်များ, ဝန်ခံ။ အရာလက်ရှိပြည်နယ်အတွက်, လမ်းပတ်ချယ်လ်ဆီးသည်သူ၏ပိတ်ပင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဇန်နဝါရီလများတွင်နောက်ခံလူမဝယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လာမယ့်နွေရာသီစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။
- PSG အသင်းအတွက်ရောင်းပါလိမ့်မယ် နေမာ ကာတာလမဂ္ဂဇင်းထဲမှာ 1er ဇန်နဝါရီ . Tuttosport ကသူ၏အစီရင်ခံစာများတွင်အားကစားဒါရိုက်တာကိုးကား လီယိုနာဒို တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် Parisian ကလပ်အဖြစ်သူ၏ compatriot မျိုးလို။ ဘရာဇီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာများ၏အနာဂတ်နွေရာသီ၏စစ်ကိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူစေလိုကြောင်းအဖြစ်ပြင်သစ်မြို့တော်မှထွက်ခွာမတတျနိုငျသျောလညျးနေဆဲလာမည့်အပြောင်းအရွှေ့ window ၏ဖွင့်ပွဲမှာပြုမူနိုင်ဘူး။ ပြင်သစ်၏ချန်ပီယံသူ့ကိုသွားကြကုန်အံ့ရှိသည်ထင်ရစဉ်ဘာစီလိုနာ, ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်နှင့်ဂျူဗင်တပ်စ်အားလုံး, သူ့န်ဆောင်မှုရရှိရန်ရပ်နေခဲ့ကြသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3940261/transfer-talk-beckham-wants-to-bring-lionel-messi-to-miami
ခြေလျင် ol - ol: Depay အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရေးအတွက် Sylvinho ဝန်ခံသည်က annoys - Olympique Lyonnais - ခြေလျင် 01